Yaa ku guuleystay tantanka kubadda Gacanta Xeebaha oo muqdisho lagu soo gebagabeeyay?+Sawirro
Sunday, May 27th, 2018 - 12:54:09
Wednesday May 31, 2017 - 12:20:44 in Wararka by Kubad Bile
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Gacanta ayaa magaalada muqdisho kusoo gebagabeeyay tartanka kubadda Gacanta Xeebaha oo uu xiriirka marki u horeysay qabtay.
Tartankan oo lagu qabtay xeebta Liido, waxaa kazoo qeyb galay afar koox, waxayna kooxihii ka qeyb alay ay soo bandhigeen ciyaar xirfadoodu sareyso, waxaana kama dambeysta tartanka usoo gudbay Kooxda Banadir Zone iyo kooxda Nageyle.
Labada koox ayaa soo bandhigay ciyaar ad loo jecleystay , waxaana waqtigii loogu talo galay guusha ay 2-0 ku raacday kooxda Banaadir Zone, oo adkaatay laba kulan oo min 10 daqiiqo ah sida uu sharciga qabo.
Gebagabadii waxaa halkaas koobbaka kaalmaha koowaad iyo labaad lagu doonsiisay kooxda Nagleyle oo kaalinta labad ashay oo kooxda Banaadir Zone oo kaalinta koowaad gashay.
Waa tartanki labaad ee uu xiriirka kubada Gacanta Soomaaliya qabnayo, waxaana ka horeeyay tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo qorshaha xiriir ahy kujirto qabashaada tartanka Jeneraal Daa’uud iyo kan horyaalka oo wiilal iyo Gabdho isugu jira.